जर्ज बनार्ड साले भोजमा पुगी आफ्नै लुगामा खानाको परिकार दलेपछि… « रिपोर्टर्स नेपाल
(Wednesday 2nd December 2020)
जर्ज बनार्ड साले भोजमा पुगी आफ्नै लुगामा खानाको परिकार दलेपछि…
प्रसिद्ध लेखक जर्ज बनार्ड सालाई एक महिलाले रात्रिभोजमा निम्तो गरिन् । उनी प्रायः लेखनमा निकै व्यस्त हुन्थे । व्यस्तताका बाबजुद उनले ती महिलाको अनुरोध अस्वीकार गर्न सकेनन् । भोजको दिन हतार हतार काम सिध्याएर महिलाकहाँ पुगे । सा आएको देखेर ती महिला निकै खुशी भइन् । उनले साको स्वागत पनि गरिन् । तर, एकैछिनमा खिन्न भइन् । कारण थियो साले लगाएको निकै सामान्य कपडा ।
सा कपडामा खासै ध्यान दिदैनथिए । उनको काममा ध्यान जान्थ्यो । कपडा फेर्न पनि भ्याएका थिएनन् । उनको समान्य पहिरन देखेपछि ती महिलाले सालाई घर गएर राम्रो कपडा लगाएर आउन अनुरोध गरिन् । साले पनि घर गए । एकैछिनमा उनी निकै महँगा पोसाकमा भोज स्थलमा आए । महिला निकै खुशी भइन् । एकैछिनमा भोज सुरु भयो । मानिसहरु स्वादिष्ठ व्यञ्जनको स्वाद लिन थाले । सा भने भोजको परिकार जम्मा गरेर आफ्ना महंगा पोसाकमा दल्न थाले । उनी भन्दै थिए, ‘ल आज मनग्गे खाओ मेरा लुगा हो । आजको यो निम्तो मलाई र तिमीहरुलाई आएका हो ।संकोच नमानी पेटभरी खाओ । ’
उनी लुगामा खाना, तरकारी, अचार, मासु, आइसक्रिम, दहि सबै दल्न थाले । उनको यस्तो हर्कत देख्दा भोजमा निम्तालु अचम्ममा परे । सबैले एक स्वरमा उनलाई प्रश्न गरे, ‘तपाई यो सब किन गरिरहनुभएको छ रु’ उनले गम्भीर हुँदै उत्तर दिए, ‘आज यहाँ मलाई होइन, मेरा लुगालाई निमन्त्रणा गरिएको हो । त्यसैले म आफ्ना यी महँगा कपडालाई भोज खुवाईरहेको छु ।
साको कुरा सुनेपछि भोजस्थलमा उपस्थित मानिसहरुले केहि बोल्न सकेनन् । उनलाई भोजमा बोलाउने महिला लज्जित भइन् । उनको अनुहार न्याउरो भयो । उनले जीवनमा आफुले निकै ठुलो गल्ती गरेको महसुस गरिन् । साथै, व्यक्तिको मुल्यांकन कपडाले होइन, उसको क्षमताले गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पनि बुझिन् । त्यसैले मानिस पोशाकले होइन विचारले महान हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
सुरभि साहित्य प्रतिष्ठानले विभिन्न स्रष्टाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने
काठमाडौं, १० मंसिर । सुरभि साहित्य प्रतिष्ठानको आज (बुधवार) को बैठकले विभिन्न स्रष्टाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने
सुदूरपश्चिम, कार्तिक २७ । कतिपय प्रदेशको तुलनामा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने दर कम रहेको सुदूरपश्चिम
बाध्यताले उत्कृष्ट साहित्य जन्माउँँदैन : प्रा. उपाध्याय ‘प्रेक्षित’
प्रा. जगत् उपाध्याय ‘प्रेक्षित’ (सदस्य सचिव – नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान) पिता÷माताः स्व.ज्यो.पं. हरिप्रसाद उपाध्याय÷स्व. मानकुमारी
महङ्गो गाडि चढ्दो रहेछ
श्रीकृष्ण सिम्खडा: मेरो टोलमा साहु छ २० बर्ष अगाडि उ चिया खाने पैसा माग्थ्यो उस्लाइ
मान्छे र प्रकृति
उषा शेरचन बिहान उदाउँछ घाम सबैका लागिरातमा उदाउँछ जून सबैका लागितरघाम र जूनलेउज्यालो बाँडेको कुराढ्वाङ
‘सन्तुष्टि कुनै पनि कर्मको अन्तिम विन्दु हुन सक्छ’ : थापा
घनबहादुर थापा पिता/माता : स्व. केहरसिंह थापा/बाटुली थापा जन्मस्थान : अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–२, स्याङ्जा अध्ययन :
सुनिल आचार्य (चिन्तक) खेतमा धान झुल्यो होला कोदो पाखा भरीगाँउको मात्र झल्को लाग्छ तस्बिर आँखा
अमेरिकी कवि लुइस ग्लुकलाई साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार
एजेन्सी, २२ असोज । यसवर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुकलाई प्रदान गर्ने घोषणा
काठमाण्डौमा मोनोरेल : कहाँ पुग्यो विद्यासुन्दरको प्रतिवद्धता ?
मंसिर १७, काठमाण्डौ । संघीय राजधानी काठमाण्डौ सहर अस्तव्यस्त छ । धुवाँ धुलोदेखि सडकमा सकस
पार्टी फोडिदिन्छु, संसद बिघटन गरिदिन्छु, इमर्जेन्सी लगाइदिन्छु भनेर कोही तर्सिनेवाला छैन- नेपाल
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कसैको धम्की र धमासबाट
काठमाडौं, १्र७ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकार अधिनायकवादी भएको आरोप